23 | March | 2013 | Danya Wadi
မြန်မာ နိုင်ငံတစ်ခုလုံးယူဂိုဆလားဗီးယားလို အစိပ်စိပ်အမွှာမွှာဖြစ်သွားမယ့် လမ်းစ …
By danyawadi March 23, 2013 Leaveacomment
ဌေးလွင်ဦး 22.3.2013 မြန်မာ နိုင်ငံ အတွင်း ဘာသာရေး နှိပ်ကွပ်မှု တွေဟာ- အစ္စလာမ် သာသနာဝင် များကို ဦးတည် တိုက်ခိုက် နေပေ မယ့်၊ မွတ်ဆလင်တွေ မျိုးမတုံးဘဲ-၊ နိုင်ငံတော်ကြီး တစ်ခုလုံးသာ အစိတ် အမွှာမွှာ ကွဲသွားစေဘို့ ဦးတည်နေ ပါတယ်။ လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံ အရေးဟာ ၁၉၉၀ နှစ်များဆီက ယူဂို ဆလား ဗီးယား ပုံစံနဲ့ တစ်ထပ်တည်း တူညီနေ ပြီး-၊ သုံးပင်လိမ် ပတ်ရှုပ်နေတဲ့ ပုံစံကလည်း ယူဂိုးဆလား ဗီးယား မှာ ဖြစ်နေတဲ့ ကိစ္စရပ်နဲ့ ကွက်တိတူညီနေပါ တယ်။ ယူဂိုဆလားဗီးယားမှာ ဆာ့ဗ်လူမျိုးစုကြီးထဲက မဟာလူမျိုးကြီးဝါဒီတွေ အာဏာရလာတယ်၊ တစ်ပြိုင် နက်ထဲမှာ အာဏာ လက်ကိုင်မရှိတဲ့ အခြားသော […]
အင်တာနက်နှင့်အီးမေးလ် အဆင့်မြင့် လက်တွေ့အသုံးပြုနည်းများ
အင်တာနက်နှင့်အီးမေးလ် အဆင့်မြင့် လက်တွေ့အသုံးပြုနည်းများ Posted: 22 Mar 2013 07:27 AM PDT အင်တာနက်နှင့်အီးမေးလ် အဆင့်မြင့် လက်တွေ့အသုံးပြုနည်းများ http://www.mediafire.com/?cq5ihn19ym02bs0 အောင်အောင်(မကစ) ရဲ့ ဘလော့ခရီးသည်လေးအား အားပေးနေကြတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်.. တုန့်ပြန်မှုအနေနဲ့ fb like လေးတော့ လုပ်ပေးခဲ့ကြပါနော်.. တတ်စွမ်းသမျှ တွေ့ ရှိသမျှလေးတွေကို ပြန်လည် မျှဝေနေပါ့မယ်…။ အဆင်မပြေတာများရှိခဲ့ပါက…cbox မှာ ပြောခဲ့ကြပါနော်.. <<<မန်ဘာဝင်ပြီး…Fb Like ခြင်းဖြင့် အားပေးကြပါနော်>>>အောင်အောင်(မကစ) ပိုင်ဆိုင်သော နေရာလေးများကိုလာလည်ကြပါ။ http://www.aungsanmks.blogspot.com http://www.ledimyethar.com http://www.ninilayy.com VMware ဖြင့် Softwares ၊ Gamesများ အား Portable ပြုလုပ်နည်း (Software + Ebook) Posted: 22 […]
မတ်လ ၂၃ရက်နေ့ မိတ္ထီလာမြို့ မြင်ကွင်းများ၊ On 23rd March Meikhtila Photo News
မတ်လ ၂၃ရက်နေ့ မိတ္ထီလာမြို့ မြင်ကွင်းများ မတ်လ ၂၃ရက်နေ့ မိတ္ထီလာမြို့ မြင်ကွင်းများ Credit – Chan AyeYouth
မိတ္ထီလာပဋိပက္ခနှင့်ပါတ်သက်ပြီးအမေရိကန် သဘောထား ….
မိတ္ထီလာမှာ အရေးပေါ် အခြေအနေ ထုတ်ပြန်တာဟာ မှန်ကန်တဲ့ လုပ်ရပ်ဖြစ်တယ်လို့ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု က ပြောလိုက်ပါတယ်။ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ အမေရိကန်ရဲ့ စိုးရိမ်မှုကို မြန်မာအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် အသိပေး ထားတယ်လို့ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဌာန ပြောခွင့်ရသူက ပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ မှာ သောကြာနေ့ က ပြောခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းတွေကြားမှာ အပြန် အလှန်လေးစားမှုရှိကြဖို့နဲ့ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရှိကြဖို့ကိုလဲ အမေရိကန်က ထပ်ပြီး တိုက်တွန်းလိုက် ပါတယ်။ အသေးစိတ်ကို မစုမြတ်မွန်က တင်ပြပေးထားပါတယ်။မိတ္ထီလာမြို့မှာ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က စခဲ့တဲ့ သွေးထွက်သံယို ပဋိပက္ခအခြေအနေဟာ ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့ ပိုဆိုးလာခဲ့တဲ့အတွက် သောကြာနေ့တုန်းက မိတ္ထိလာခရိုင်မှာ အရေးပေါ် အခြေအနေ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ မိတ္ထီလာမြို့နယ်၊ ဝမ်းတွင်းမြို့နယ်၊ မလှိုင်မြို့နယ်နဲ့ […]
Burma: Risk of further violent clashes unless action is taken
Friday, March 22, 2013 Amnesty, Buddhist, Muslim, Myanmar A man stands in front ofamosque as it burns in Meikhtila March 21, 2013 redit: Reuters/Soe Zeya Tun Amnesty UK: March 22, 2013 Violence between Buddhist and Muslim communities in Burma that reportedly left several people dead demonstrates an urgent need for Burmese authorities […]
Saturday, March 23, 2013 AlJazeera, Killed, Refugee, Rohingya, Thailand Many ethnic Rohingya Muslims have been killed or forced to flee homes due to attacks by Buddhists over the year [AFP] Officials report at least 42 refugees killed and dozens more wounded by raging fire at crowded camp in north Thailand. Aljazeera: March 23, 2013 […]
Saturday, March 23, 2013 Anti Islam, Myanmar ethnic violence, UN Special Adviser to the Secretary-General for Myanmar Vijay Nambiar. Photo: UNIC/Yangon UN News Centre 22 March 2013 – The United Nations special envoy for Myanmar has voiced deep sorrow at the tragic loss of lives and destruction in Meiktila township in Mandalay division, one […]